Kpido: Mail | Martech Zone
Ka m na-ede ihe a, anọ m n'ozi ọkụ mmụọ. Enwere m ozi ịntanetị na-agụghị 1,021 na azịza m na-abụghị nke na-agafe n'ime ozi ziri ezi site na mgbasa ozi mmekọrịta, oku ekwentị, na ozi ederede. M na-ezipụ ihe dị ka 100 email na-enweta ihe dị ka 200 email kwa ụbọchị. Ma nke ahụ abụghị gụnyere ndebanye aha na akwụkwọ akụkọ m hụrụ n'anya. Igbe mbata m enweghị njikwa na igbe nnabata efu dị m ka dinosaur pink. Etuola m otu tọn
Scout: Ọrụ maka Izipu kaadi ozi maka $ 1 Nke ọ bụla
Scout bụ ọrụ dị mfe nke na - eme otu ihe - ọ na - enye gị ohere izipu 4 × 6, kaadi agba akwụkwọ zuru oke nke ị mebere. Na-eweta foto nke aka gị na nke azụ, nye ndepụta nke adreesị (anyị nwere ike inyere gị aka wuo ya ma ọ bụ ị nwere ike ime ya n'onwe gị), ha ga-ebipụta akwụkwọ ozi mara mma wee ziga ya na nọmba ọ bụla nke ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị ahịa gị $ 1.00 ọ bụla. Otu Scout si arụ ọrụ Tinye ihe oyiyi - Jiri ha